ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက်
ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက်
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 18, 2013 in Copy/Paste, Photography | 18 comments
Posted by မီးမောင်
-ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက်
မှာတွေ့မိလို့ ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ် Posted by မီးမောင် on June –9– 2013
ဓာတ်ပုံဆရာတွေဆိုတာ တခြားသူတွေနဲ့ မတူ ကွဲပြားနေတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်သလို လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာပစ္စည်းတွေကို အရမ်း ချစ်ကြပြီး တသသ ဖြစ်နေကြတာ တခါတလေ ဘေးလူ အမြင်ကပ်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဒီနေ့တော့ Photography Talk ဆိုတဲ့ website မှာ သွားဖတ်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို ချစ်သူအဖြစ် မရွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲက အချက်အလက်တွေက အတော်များများ မှန်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရပေမယ့် မူရင်း ရေးသူကတော့ ရယ်စရာ အပျော်သဘောသာ သဘောထားဖတ်ပါလို့လည်း ကြိုတင် တောင်းဆိုထားလေရဲ့။ တကယ်တော့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို လူအများစု သဘောကျကြပါတယ်နော့။
၁။ သူတို့က ခပ်ကြောင်ကြောင်နိုင်ကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာတွေဆိုတာ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ပြီး ဖန်တီးမှုကို အမြဲလိုလို တွေးနေတတ်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် သင်နဲ့ နှစ်ယောက်အတူ တစ်စားပွဲတည်း ထိုင်နေကြချိန် သင့်ကို စိုက်ကြည့်နေရင် တစ်မျိုး မထင်ပါနဲ့လေ။ သူတို့ စဉ်းစားနေတာက သင့်ကို ဘယ်ရှုထောင့်က ရိုက်ရင် အလှဆုံးလဲ စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
၂။ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေက အမြဲ သင့်အတွက် ထူးဆန်းနေတတ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ ဘယ်တုန်းကမှန်း မသိ သင် မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခိုးရိုက်ထားတဲ့ သင့်ဓာတ်ပုံကို ဘောင်သွင်းပြီး ပေးတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၃။ သူတို့ အကြိုက်ဆုံး နေ့တွေက သင်နဲ့ မတူနိုင်ဖို့ များပါတယ်။
လူအများစုနည်းတူ သင်လည်း နေသာတဲ့ နေ့တွေကို သဘောကျတာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတွေကတော့ လူအများစုကို အလွမ်းအဆွေးရသတွေ ပေးတတ်တဲ့ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်း နေ့တွေကို ပိုနှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်။
၄။ စုဆောင်းရတာ ဝါသနာထုံကြတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာ အများစုဟာ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်နဲ့ သူတို့ စိတ်ဝင်စား သဘောကျတဲ့ အရာတွေကို ခဏတာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စုဆောင်း သိမ်းဆည်းထား တတ်ကြပါတယ်။
၅။ စည်းကမ်းတွေ ဥပဒေတွေလည်း ချိုးဖောက်ဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး။
အထူးသဖြင့် ကန့်သတ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ ဟောင်း/ပျက်တွေထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရတာဟာ ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ သဘောအကျဆုံး လုပ်ဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရဖို့ အာရုံစိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် စည်းကမ်းတွေ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်မိနေမှန်းတောင် သတိမထားမိတတ် ကြတော့ပါဘူး။
၆။ သူတို့ ခရီးသွားရင် အိမ်ပြောင်းသလား ထင်မှတ်ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာ အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ကင်မရာ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေမပါဘဲ ခရီးသွားလေ့ မရှိကြပါဘူး။
၇။ ရုပ်ရှင် အတူကြည့်ကြရင် ဘယ်တော့မှ သင်ထင်ထားသလို့ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာ အများစု ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြရင် အရောင်က ဘယ်လိုဖြစ်တယ်၊ composition က ဘယ်ညာ၊ lighting က ဘယ်သို့နဲ့ တစ်ချိန်လုံး ဝေဖန်နေကြတော့တာပါပဲ။
၈။ ဘယ်အရာကို မဆို အမှတ်အသား လုပ်လေ့ရှိတယ်။
အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုပေါ့။ ဘာ watermark မှ မတတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ portfolio များ သင် မြင်ဖူးပါရဲ့လားဗျာ။
၉။ တခြားသူတွေ အားလုံး အသုံးမကျဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာတွေဆိုတာ ဘဝင်မြင့်တဲ့ သတ္တဝါတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ရဲ့ အနုပညာ လက်ရာကိုမှ သူတို့လက်ရာလောက် ကောင်းတယ် မထင်တတ်ကြဘဲ အလွန်ဆုံး “ငါ့လောက် နီးနီးတော့ ကောင်းသားပဲ” ဆိုတာလောက်သာ ပြောတတ်ပါတယ်။
၁၀။ မနာလိုဖြစ်ပုံ တမူ ကွဲပြားတတ်ကြတယ်။
ယောင်္ကျားအများစု သူများကို မနာလို ဖြစ်ကြပုံနဲ့ မတူဘဲ သူတို့က ကင်မရာပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသာ မနာလို ဖြစ်တတ်ကြတာ များပါတယ်။
၁၁။ အမိုက်စား လူတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်လေ့ရှိတယ်။
သင့်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း အများအပြား ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံဆရာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အချိန် အများစုကို မော်ဒယ်တွေ၊ ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ တခြား အမိုက်စား ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာ ကုန်လွန်လေ့ ရှိပါတယ်။
၁၂။ သူတို့ ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေက သူများတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတူဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာ အများစုက အနုပညာဆန်လွန်းပြီး လူကြိုက်နည်းတဲ့ ပျင်းစရာ ဇာတ်ကားတွေကို ပိုကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။
၁၃။ ပုံစံ ခပ်တုံးတုံးတွေ ဝတ်ဆင်တတ်ကြတယ်။
သူတို့က ဖလင်ကင်မရာတွေကို တပ်မက်ရင်မက် မဟုတ်ရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လေးဆယ်လောက်က ပုံစံမျိုးတွေ ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ (နောက်ပိုင်း ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာတွေကတော့ ဒီဇိုင်းတွေ လန်းသလားလို့ ။ စာရေးသူ)
၁၄။ အရာရာကို ထိန်းချုပ်ချင်ကြတယ်။
အရာရာတိုင်းရဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို ထိန်းချုပ်ချင်ကြတယ်။ သင့်ကို ဖြစ်ဖြစ် စားပွဲပေါ်က ကော်ဖီခွက်ကို ဖြစ်ဖြစ် နေရာတကျ လှလှပပ ဖြစ်စေချင်တတ်တယ်။ (ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ဆရာတစ်ယောက် ပြောတဲ့ ဆင်ဆရာတွေလေ ဆိုတဲ့စကားကို သတိရမိတယ်။ ဆင်ရိုက်တာတွေ များလွန်းလို့တဲ့။ စာရေးသူ)
၁၅။ သင့်အမြင်ကို သိပ် ဂရုစိုက်လေ့ မရှိဘူး။
သူတို့ ဆန္ဒက သူတို့ နောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သင့်ကို ပြချင်တာ တစ်ခုပါပဲ။ သင့်ရဲ့ ဝေဖန် သုံးသပ်မှုကို သိပ်မျှော်လင့်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၆။ သူတို့ ဆက်သွယ် ဆက်ဆံပုံက စိတ်ပျက်စရာ။
သူတို့ account မှာ ဓာတ်ပုံတွေသာ တင်ချင် တင်နေမယ် သင့်ရဲ့ Facebook message နဲ့ miss call တွေကိုတော့ ပြန်ခေါ်/ပြန်ပြောချင်မှ ပြောပါလိမ့်မယ်။
၁၇။ သင့်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမှန်အတိုင်း ပြောတတ်လွန်းပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာ ရည်းစားကို “ကျွန်မ ဝနေလားဟင်” လို့ မေးမိရင်တော့ “အင်း ဟုတ်တယ်” လို့ပဲ ပြန်ဖြေဖို့ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့လေ။ သူတို့ Photoshop နဲ့ ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၈။ သူတို့ရဲ့ အချိန် အများစုက ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ကုန်လွန်ပါတယ်။
Facebook တို့ porn တို့ ကြည့်နေတယ်တော့ မထင်ပါနဲ့လေ။ များသောအားဖြင့် ဓာတ်ပုံတွေ edit လုပ်နေတတ်ကြတာ များပါတယ်။
၁၉။ ရင်ခုန်စရာ နေဝင်ချိန် ရှုခင်းတွေ သိပ်မျှော်လင့်လို့ မရပါဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်နဲ့အတူ လှပတဲ့ နေဝင်ချိန် ရှုခင်းကို ငေးကြည့်နေမိချိန်မှာ သူက တခြားလူတွေလိုတော့ romantic ဖြစ်တဲ့ အတွေးတွေ တွေးနေမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ သူက f/8 ကို 1/125 နဲ့ ရိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးနေတာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၂၀။ သင့်အတွက် ပိုက်ဆံ အများကြီး သုံးချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်နဲ့ တွဲသွားရင်း အရမ်းလှတဲ့ ဖိနပ်လေးတစ်ရံ တွေ့လို့ လိုချင်စိတ် ဖြစ်ရင်တောင် သူ့ကို ပူဆာလို့ ရလိမ့်မယ် မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သင့်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ပေးချင်မှ ဝယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့အတွက် မှန်ဘီလူးတစ်လုံး ဝယ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကို နှမြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၁။ အစာ စားချိန်လည်း သူများနဲ့ တူမှာ မဟုတ်ပါ။
အစာ စားရင်လည်း သူများတွေလို မဟုတ်ဘဲ မစားခင် ငါးမိနစ်လောက်တော့ စားစရာ ဟင်းပွဲတွေကို ရှုထောင့် ပေါင်းစုံက ဓာတ်ပုံရိုက်ချင် ရိုက်နေတတ်ပါတယ်။
၂၂။ သင့်မိတ်ဆွေတွေက သူ့ကို ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးရင် မကြိုက်တတ်ပါဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာတွေအနေနဲ့ ဝါသနာရှင်တွေဆီက အမေး မခံချင်ဆုံး မေးခွန်းက ကင်မရာဝယ်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် “ကျွန်တော်ဗျာ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း ထွက်တဲ့ ကင်မရာမျိုး လိုချင်တယ်ဗျာ။ Professional ကြီးတွေတော့ မလိုချင်ပါဘူး။” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးရင် စိတ်ညစ်တတ်ကြပါတယ်။
၂၃။ လက်တွဲ သွားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှား
သူတို့က သွားလေရာ ကင်မရာ တကားကားနဲ့ ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။
၂၄။ သင့်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ဘယ်တော့မှ မပေးတတ်ဘူး။
အရင်နဲ့က သင့်ချစ်သူ ဓာတ်ပုံဆရာ သင့်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးထားတာ သတိရမိရင်တော့ သိပ် မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံ သင် မြင်ဖူးချင်မှတောင် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
၂၅။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ရင် ရှောင်လေ့ မရှိဘူး။
အကယ်၍များ သင်နဲ့ သင့်ချစ်သူ ဓာတ်ပုံဆရာတို့ ချိန်းတွေ့နေတုန်း မုန်တိုင်း တိုက်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အန္တရာယ်ကင်းအောင် နေပါလေ။ သူကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ရှားပါး အဖြစ်အပျက်တွေကို အမိအရ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူဖို့သာ စိတ်သန်နေပါလိမ့်မယ်။
၂၆။ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကို မေ့နေတတ်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ ချစ်သက် နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ workshop တစ်ခုခုများ တိုက်ဆိုင်နေပြီ ဆိုရင်တော့ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် သိပ်မထားပါနဲ့တော့။
၂၇။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ အန္တရာယ်က မကာကွယ်တတ်ပါဘူး။
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ အရင်ဆုံး ကာကွယ်တာကတော့ ကင်မရာနဲ့ အခြား ကိရိယာတွေကိုပါ။ သင့်ကို မပြောနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကိုတောင် ဒုတိယနေရာ မှာပဲ ထားလေ့ ရှိပါတယ်။
၂၈။ လူပုံအလယ်မှာလည်း တခြားသူတွေကို စိုက်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သွားရင်းလာရင်း ထူးခြား ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ သူ ငေးကြည့်နေတာ တွေ့ရင် စိတ်မပူလိုက်ပါနဲ့။ တခြားအတွေးတွေ သူ့ဆီမှာ မရှိပါဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလူကို အတွေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂၉။ စိတ်ပျက်စရာ နေရာတွေမှာ အလှတရားကို ရှာဖွေတတ်ပါတယ်။
သာမန်လူတွေ သွားလေ့မရှိတဲ့ စိတ်ပြတ် ညစ်ထေးနေတဲ့ လမ်းကြားတွေ နေရာတွေမှာ အလှတရားကို သူတို့ ရှာဖွေလေ့ ရှိပါတယ်။
၃၀။ ခရီးအတူတူ သွားခဲ့ရင်တောင် အတူတူ သွားခဲ့ကြောင်း သက်သေပြစရာ မရှိတတ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က ကင်မရာ ရှေ့မှာထက် ကင်မရာနောက်မှာသာ နေနေတာ များနေလို့ပါ။
၃၁။ သင် ဓာတ်ပုံရိုက်စေချင်တဲ့ အရာကို သူက ရိုက်ချင်မှ ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာတွေက မာနကြီးပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်ကြကာ သူတို့ အတွေးထဲမှာ မထိုက်တန်ဘူး ထင်တဲ့ အရာတွေကို ပိုက်ဆံမရဘဲနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ မရှိကြပါဘူး။
၃၂။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ လူတိုင်းကို ပြန်ပြောပြချင်တယ်။
တကယ်လို့ သင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားလက်ဆုံ ကျနေပြီ ဆိုရင် သူ့ကို ကြာကြာ ပစ်မထားမိပါစေနဲ့။ သူ အရင်က ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေနဲ့ လူတွေအကြောင်းကို သောင်စဉ်ရေမရ လျှောက်ပြောနေတတ်ပါတယ်။
၃၃။ မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးရတာ ကုန်ကျစရိတ် များတတ်ပါတယ်။
သူတို့ စိတ်ဝင်စား လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးကြီးကြီးတွေ ဖြစ်နေတော့ သူတို့ အကြိုက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အတော် ကုန်ကျစရိတ် များပါလိမ့်မယ်။
၃၄။ သင့် ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကို Photoshop နဲ့ ပြင်ခိုင်းဖို့ မရနိုင်ပါဘူး။
သင့်မှာ အရင် ခရီးသွားတုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ မိသားစု ပုံတွေကို ပြင်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ချစ်သူ ဓာတ်ပုံဆရာကို အကူအညီတောင်းဖို့ ပြေးမြင်မိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတ္တက သူတို့ ရိုက်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို edit လုပ်ဖို့ ဆန္ဒ မရှိတတ်ကြပါဘူး။
၃၅။ အနုပညာ ဝါသနာပါတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို သဘောမကျတတ်ပါဘူး။
သူတို့က သူတို့ထက်မှ မကျော်ကြားရင် အဲဒီလူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ ဆန္ဒ သိပ်မရှိကြပါဘူး။
၃၆။ သူတို့ လက်ရာကို print ထုတ်ခဲပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ harddisk တွေက ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။
၃၇။ သင့်ကြောင့် ကင်မရာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ပြသနာ အကြီးအကျယ် တက်ပြီ မှတ်လိုက်ပါ။
ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အိတ်ထဲက ပစ္စည်းတွေဟာ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ အထက်မှာ တန်ဖိုး ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ ပစ္စည်းတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ အထူး ဂရုပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၃၈။ သူ ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မော်ဒယ် လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်။
အစပိုင်းမှာတော့ ပျော်စရာကောင်းသလို ထင်ရစရာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ သူနဲ့ အပြင်ထွက်မိတိုင်း အလင်းရောင် အနေအထားများ လှနေပြီဆိုရင် သင် ဘယ်လို အဝတ်အစားပဲ ဝတ်ထားပါစေ အနည်းဆုံး တစ်ပုံတော့ ကိုယ်ဟန်ပြ အရိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်။
၃၉။ မိသားစု အခမ်းအနားတွေမှာ ကိုးရို့ကားယား လုပ်တတ်ပါတယ်။
သင့် မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက် မင်္ဂလာ ဆောင်တယ်ဆိုကြပါစို့။ သင့်ချစ်သူ ဓာတ်ပုံဆရာကို ခေါ်သွားမိရင် သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာက အဲဒီပွဲမှာ ငှားထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ငှားထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို လိုက်ဝေဖန်နေတတ်ပြီး သူ့ကို အကူအညီတောင်းတုန်းကတော့ ငြင်းပြီး နောက်မှ သူ့ကို မရိုက်ခိုင်းရလားလို့ မကျေမနပ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၄၀။ သဘာဝအတိုင်း မကြိုက်တတ်ဘူး။
ဘယ်ပုံကိုမဆို Photoshop သို့မဟုတ် Lightroom နဲ့ ပြင်ရမှ ကျေနပ်ပါတယ်။ ကင်မရာထဲက ဒီအတိုင်း ထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံကို မြင်ရဖို့ ဘယ်တော့မှ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
၄၁။ သင့်မျက်လုံးထဲကို စိုက်ကြည့်နေရင် သူတွေးနေတာက သင်မျှော်လင့်သလို လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်အနေနဲ့ ရင်ခုန်စရာလို့ ထင်နေပေမယ့် သူ သင့်ကိုကြည့်ရင်း တွေးနေတာက သင့် ပါးပေါ်က အဖုလေး သို့မဟုတ် သင့် နဖူးပေါ်က အရေးအကြောင်းလေးကို ဘယ်လို ဖျက်ရမလဲဆိုတာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အားလုံး ဒီအတိုင်းပဲလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ အပျော်သဘောမျိုး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသာ ဖတ်ပြီး ရယ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
အဲ့လို သများဒဂါ လဗြိုလ်လေးလရွယ်လေး လာဘ်တိတ်အောင်လုပ်တဲ့ အကျိုး ဘ၀မကူးဘဲ ပေးပါဇီ တော်..
ဘလာဘို ပါ ဆြာအုပ်။
ဟိုနေ့က အနော် ရှယ်မို့ စဉ်းစားသေးတယ်။ ဘယ်သူမှ ဓာတ်ပုံရိုက်မပေးမှာစိုးလို့။
” ဘယ်သူမှ ဓာတ်ပုံရိုက်မပေးမှာစိုးလို့ ”
မိန်းကလေးတွေများ ကွက်ကျော်တွေးတတ်ပါပေ့ကွယ် ။
ဒီလိုနှင့်ပဲ ၊ အဘ တို ယောက်ျားလေးတွေ – – – –
မှားပါတယ် ..ကျော်က ခပ်ဖားဖား နိုင်တာပါ
အောင်မငီး .. ခုတောင် ရင်းတုံးကိစ္စ ကွိုင်တက်နေတာ
ဟုတ်ပ မယုံရင် ကုတင်အောက် လာနှိုက်လှည့်
သများ မူးသွားလို့ပါ ချင့်
ဟင့်အင်း ကျော် ရုပ်ရှင်တူတူ ကျိရင် အမြင်နဲ့ အကြား အာရုံ အလုပ်မလုပ်ဘူး…။ပြွတ် ပြွတ်
ဒါပေါ့ဗျ… ကြောင်တွေတောင် သူရို့နယ်နမိတ် သတ်မှတ်တဲ့အနေနဲ့ အခန်းဒေါင့်က သံသေတ္တာတွေ သေးနဲ့ပန်းသေးတာရယ်
တောက်… ငါဒီတသက် စကားလက်လို တင်ပဆုံ ပိုင်တဲ့မိန်းမ မတွေ့ဒေါ့ဘူးလားကွ ဟေ…။
ဟေ့လူ ဒါ နိုင်ငံရေး
ကျော် က မာရီယာ အိုဇာဝါ ပိတ်သတ်ပါခီညော်
လာမပျောနဲ့ တာကယ်နက်ခ် ပဲရှိတယ်..ဒါပဲဝတ်ရမှာ
ဒင်းက ကျုပ်လောက်မှ လေ့လာမထားတာ
သင်၏ရုပ်ရည်နှင့် အချိုးကျမည် ကိုမမေ့အပ်
ကျော် က လိမ်တတ်ပါသည်
ပက်ဆံလည်း အများကြီး မရှိပါဝူး
လက်တကမ်းက ပေါင်မုန့်တောင် လှမ်းယူဖို့ ပျင်းသူရယ်ပါ
တွဲပါတယ်ဗျ .. လက် လက်
ကျနော့် ထိပ်ဆုံး ပေါ့ထလိပ် မော်ဒယ် ကို ကျနော်ပုံပို့တာ တနှစ်တိတိကြာပြီးမှ
၂၆။ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကို မေ့နေတတ်ပါတယ်
မမေ့ပါဘု မှတ်ရတာမခက်အောင် ဗယ်လင်တိုင်းမှာ အဖြေတောင်းထားတာကိုးးးးး (မမြင်ဇီယ)
ကာကွယ်တတ်ပါတယ်။ နို့မို့ အ၀ှာ အညှစ်ခံထိပြီး သေနေလောက်ပြီ (အဟွာ=လည်ဇိ)
ဒါကတော့ လှရင် လှသလို လစ်ရင်လစ်သလို ပေါ့ဗျာ
နင်က ငဂို ဒါ့ပုံပြန်ရိုက်ပေးလို့လား
အင်းလေ ..ရိုက်ချင်ကွ ကိုယ် ၀ယ်ရိုက်ပလား
မပေးဘာဘူးဗျာ။ (လာဖတ်ဇမ်း ဟိုမိန်းမဂျီး)
ညီးကိုညီး တောင်ကိုရီးယား ကားမော်ဒယ် မှတ်နေသလား
ထုတ်ပါတယ် တပုံတလေ ..(မော်နီတာအရောင်ချိန်ဖို့)
ကျော့်အသိ ဒါ့ပုံဆြာကို ပြေးသတိရတယ်။ သတို့သားသတို့သမီး လျှောက်လမ်းမှာလှမ်းနေတုန်း ရှေ့ကနေဗြုန်းဆို ပက်လက်ကားယားကြီး လှချပြီး ရိုက်တာ
ဆြာအုပ်တော့ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော်ဖြစ်ပြီ။
မှန်ချက်ကတော့ ၉ လောက်ရှိတယ်ပြောရမယ်။ :harr:
၃) ရယ် ၂၉) ရယ် ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေပါ။
သူ့ခမျာလဲ အဲလိုပါပဲဗျာ ဟဟ
အရင်တုံးကတော့ မော်ဒယ်လုပ်ပေးတယ် နောက် ညောင်ရွှေဈေးမှာ ထင်းသည် လည်းလုပ်ခိုင်းပီးကတည်းက နောက်ဘယ်တော့မှ မော်ဒယ်မထိုင်ပေးတော့ဘူး ဟဟဟ
ဓာတ်ပုံဆရာ ဒါမှမဟုတ် ဖိုတိုဂရပ်ဖာ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် ကင်မရာကိုင်ပြီး တစ်ချပ်ချပ် တစ်ဖျပ်ဖျပ် ရိုက်တတ်ကြတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း ခုနစ်ဆင့် ရနိုင်ပါမယ်။
အွန်လိုင်း ဂုရုများ။ ။အဆင့် သုည
ဒီအဆင့်မှာရှိတဲ့ လူတွေဟာ ဓာတ်ပုံကို မယ်မယ်ရရ မရိုက်ကြတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံဆရာဆိုတဲ့ အဆင့်ထဲတောင် ထည့်ဖို့ရာ အံမ၀င်ပါ။ ဒီလူတန်းစားဟာ အင်တာနက်ဆိုတာ မပေါ်ခင်က မရှိခဲ့ပါဘူး။ အတော်များများဟာလဲ အမျိုးသားများ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတို့ ထုံးစံအတိုင်း မော် တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သေနတ်၊ ဒုံးပျံ စတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဆက်စပ်တာတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ ဟာ ဖိုတိုဂရပ်ဖီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ၊ ဖိုရမ်တွေကို ၀င်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ ကင်မရာအသစ်တစ်ခု ထွက်ရင် အွန်လိုင်းရီဗျုးတွေ၊ စမ်းသပ်ချက်တွေ လိုက်ရှာဖတ်တတ် ကြတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် ဘယ်ကင်မရာက ရီဇော်လူးရှင်းက ဘယ်လောက်ရှိပြီး အုိုင်အက်စ်အိုက ဘယ်လိုကောင်းတာ၊ ဘယ်မှန်ဘီလူးနဲ့ ဘယ်မှန်ဘီလူးမှာ ဘယ်ဟာက ပြတ်သားမှု ကောင်းတယ်။ ဘယ်ကင်မရာနဲ့ ဘယ်ကင်မရာဆိုရင် စကင်းတုန်းက ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ် အစရှိသဖြင့် ဖတ်ထားမှတ်ထားတာတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံလောကသားတွေတောင် ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ နားထောင်ရလောက်အောင် ဝေဖန်လေကန်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့ပြောနေတဲ့ ကင်မရာတွေ မှန်ဘီလူးတွေကို လက်တွေ့ဘ၀မှာ တစ်ခါမှကိုင်တွယ်ဖူးခြင်း မရှိကြပါဘူး။ ဒီလိုဖတ်မှတ်ပြီး ပြောနေရရင်ပဲ ဖိုတိုဂရပ်ဖာ လူရာဝင်ပြီလို့ ထင်မှတ်နေတတ်ကြသူများပါပဲ။ ဘာနဲ့ အလားသဏ္ဌာန်တူသလဲဆိုရင် ပြိုင်ကားတွေအကြောင်းပါတဲ့ ကတ်တလောက်စာအုပ်ကြီးကို အဖန်တလဲလဲဖတ်ပြီး သွားရည် ကျနေတဲ့ ကလေးလိုပါပဲ။ တကယ်တမ်း ကားပေါ်တက်မောင်းဖို့ရာ (၁၈)နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်း မရနိုင်သေးသလို အသက်ပြည့်လို့ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရခဲ့လဲ ပြိုင်ကားဝယ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလိုပါ။ မော်တော်ကားအင်ဂျင်မှာ တပ်ထားတဲ့ မူလီနဲ့နပ်တွေရဲ့ ခံနိုင်ဝန်နဲ့ အရစ်အရေအတွက်ကို သိတာနဲ့ မော်တော်ကားပေါ်တက်ပြီး ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မောင်းတတ်တာနဲ့ တခြားစီဖြစ်သလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ကို ဓာတ်ပုံဆရာအဆင့်ထဲတောင် မထည့်ဘဲ ပေယျာလကန် လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ထက် အွန်လိုင်းမှာ ရီဗျူးတွေ ရှာဖတ်ပြီး လေပန်း နေကြဦးမှာပါပဲ။
တက်ကနစ်ရှင် အရူးများ။ ။ အောက်ဆုံး အဆင့် (၁)
ဖိုတိုဂရပ်ဖာ ဘိတ်ချေး အဆင့်လို့ ပြောရမယ့် ဒီလူတွေ (အမျိုးသားများသာ အများစု) ဟာ ခေသူတွေ တော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဟုမ်းသီရေတာ စစ်စတမ်၊ နောက်ဆုံးပေါ် လက်ပ်တော့နဲ့ ဟန်းဆက် အကောင်းစား အစရှိတဲ့ ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ကိုင်နိုင်တဲ့ လူတန်းစားပါ။ ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်ကလည်း အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒေါက်တာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင် အစရှိတဲ့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်တဲ့ အလုပ်များနဲ့ အသက်မွေးသူများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက်အသစ် ပေါ်တိုင်းလည်း ကိုင်တတ်သလို ကင်မရာကိုလည်း မော်ဒယ်အသစ် ပေါ်တိုင်း လဲကိုင်တတ်ကြပါတယ်။ သင်သာခွင့်ပြုလိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ ကင်မရာအိတ်ကြီးကိုဖွင့်ပြီး ကင်မရာဘော်ဒီတွေ၊လန်းစ်တွေကို ထုတ်ကြွားဖို့ တက်တက်ကြွကြွရှိသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဈေးဘယ်လို သင့်ပြီး ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း၊ ဘယ်လို အချိန်ယူ လေ့လာပြီးမှ ၀ယ်ယူ စုဆောင်းထားတာဖြစ်ကြောင်း၊ တံတွေးစင်မတတ် ရှင်းပြတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်း တွေအကြောင်း မ၀ယ်ခင်ကကော ၀ယ်ပြီးတဲ့နောက်ကော စေ့စေ့ညက်ညက် လေ့လာတတ်သူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့ပေသော်ငြားလည်း ဒီလူတွေမှာ အနုပညာ၊ ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်တွေ မရှိတတ်ကြပါဘူး။သင်သတိထား မိတာက သူတို့ ကင်မရာတွေကိုသာ ထုတ်ပြဖို့ဝန်မလေး ပေမယ့် သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုတော့ထုတ်ပြဖို့ တွန့်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရိုက်ထားသမျှတွေကလည်း ကင်မရာစမ်းတဲ့၊ မှန်ဘီလူးစမ်းတဲ့ ပုံတွေသာများပြီး လောက် လောက်လားလား တစ်ပုံကောင်း နှစ်ပုံကောင်းဟာ တော်တော်လေး ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကောင်းဖို့ အဓိကအချက်ဟာ အလင်းဆိုတာမဟုတ်ဘဲ ကင်မရာလို့ တလွဲထင်နေတတ်သူများပါ။ ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်ဖို့ထက် အင်တာနက်က ဓာတ်ပုံဝက်ဘ်ဆိုတ်တွေမှာ အသင်းဝင်ပြီး သူတို့လိုလူအချင်းချင်း ကင်မရာ အိုင်အက်စ်အိုစမ်းတာ၊ မှန်ဘီလူးပြတ်သားမှု စမ်းတာတွေ ဖလှယ်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနတ်ဆိုဒ်တွေ ထောင်ထားတတ်ကြပြီး အဲဒီမှာလည်း ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ တင်မထားဘဲ သူတို့ နောက်ဆုံးဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်း ရီဗျုးတွေ ရေးနေ တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေတင်သမျှကိုလည်း အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သုညအဆင့်လူတွေက တရေးတယူလုပ်ပြီး ဖတ် တတ်ကြပါတယ်။
၀ါသနာရှင် သူဌေးများ။ ။အဆင့် (၂)
ဒီလူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ဆင့်ထက်တော့ ဓာတ်ပုံ ပညာပိုင်းမှာ အတန်ငယ်သာပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရဲ့ သနားစရာဘ၀တွေကို ရိုက်လာပြီး ဂရိန်ထနေတဲ့ အဖြူ အမည်းပုံ ပြောင်းလိုက်ရင် တော်တော်လေး အနုပညာ မြောက်သောပုံဖြစ်ပြီလို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဟာ လူချမ်းသာများဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့အနုပညာကို လွတ် လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်သမျှ အမြင့်ဆုံးကင်မရာကို ရွေးကိုင် တတ်ကြပါတယ်။ Leica, Canon, Nikon အစရှိသည်ဖြင့် Brand တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီး အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဘော်ဒီ၊ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ မှန်ဘီလူးများကို ရွေးဝယ်တတ်ကြပါ တယ်။ တက်ကနစ်ရှင်အရူးတွေနဲ့ ကွာတာက ၀ါသနာရှင် သူဌေးတွေဟာ အကောင်းဆုံး(ဈေးအများဆုံး) ဆိုတာကို ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ပစ္စည်းတွေအတွက်စိတ်ပူ ခြင်းသိပ်မရှိဘဲ ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်နိုင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ကင်မရာအစုတ်လေးတွေ လက်ထဲထည့်ပြီး ရိုက်ခိုင်းရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး လုံးဝမရိုက်တတ်ကြတော့တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ပစ္စည်းတွေအတွက် ကောင်းပါ့မလားဆိုတာ ပူပန်ပြီး ဓာတ်ပုံထွက်မရိုက်ဘဲ အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာရေး ထွက်နေပြီဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေးပဲ အောက်အဆင့်တွေကို ကျသွားမှာကတော့ အသေအချာပါ။
ကြေးစားဓာတ်ပုံဆရာများ။ ။အဆင့် (၃)
ဒီလူတွေက တကယ့်ကို ကြေးစားတွေပါ။သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရာနှုန်းပြည့်ဝင်ငွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရောင်းစားခြင်းနဲ့ပဲ ရှင်သန်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အနုပညာ တွေဘာတွေလုပ်ဖို့ အချိန်မပေးပါဘူး။ ရိုက်တဲ့ပုံက ပိုက်ဆံရဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဓာတ်ပုံနဲ့ဆက်စပ်စ္စည်းမှန်သမျှကို တီးမိခေါက်မိရှိသလို တော်တော်တန်တန်ပုံကောင်းတစ်ပုံရ အောင်လည်း ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိကြသော်လည်း စိတ်ကူးတွေ ခံစားချက်တွေ ဖော်ကျူးတာမျိုး ရိုက်ဖို့ မစဉ်းစားအားကြပါဘူး။ သူတို့အတွက် တစ်ခါတလေ ကိုယ် ပိုင်အချိန်တွေရခဲ့မှသာ ပုံကောင်းတွေဖန်တီးဖို့အခွင့်သာမှာပါ။ ကြေးစားဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက် ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဆိုတာဟာ ပျက်လို့ပြင်ဆိုင်ပို့ရမယ့်အဆင့် မရောက်မချင်း ခေါင်းထဲထည့် မစဉ်းစားအားပါဘူး။ ဘယ်နေ့မှာဘာပွဲကို ကန်ထရိုက် လက်ခံရိုက်ရအောင် လုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်ဓာတ်ပုံဆရာ၊ ဘယ်ဓာတ်ပုံတိုက်ကတော့ ဈေးဘယ်လောက်ချနေပြီဆိုတာတွေ ပဲ ပူပန်နေတတ်ပါတယ်။ ကင်မရာဈေး မှန်ဘီလူး ဈေးတွေ ဆိုတာကိုလည်း သုံးလေးနှစ်တစ်ခါ လိုအပ်လို့ဝယ်ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကလွဲပြီး ဓာတ်ပုံကူးတဲ့ ဆိုင်တွေက လစဉ်ပုံကူးနှုန်းထား ဈေးအတက်အကျကိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြေးစားဓာတ်ပုံဆရာတွေဟာ သဘာဝရှုခင်းတွေရိုက်ခဲပါတယ်။ ကင်မရာတွေကိုလည်း ၀ါသနာရှင်သူဌေးတွေလို အကောင်းစား မကိုင်ကြပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုတ်ထောင်ပြီးလည်း ပုံမတင်ကြပါ။ ကင်မရာရီဗျူးတွေလည်း မရေးကြပါ။
ပုံရိပ်ဖမ်းသူများ။ ။အဆင့် (၄)
ဒီအဆင့်က နားလည်ဖို့ခက်သလို လူအများစု ပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ဟာ တကယ်ရိုက်ပါတယ်။ အများကြီးရိုက်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေကြီးပြင်းလာတာတွေကအစ ကြုံသမျှအဖြစ်အပျက်တွေ၊ ရောက်သမျှနေရာတွေ၊ တွေ့သမျှ လူတွေ စသည်ဖြင့် အကုန်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ဗိသုကာ၊ စာပေသမားစသည်ဖြင့် အနုပညာဆက်စပ်သူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ဆီက ထူးထူးခြားခြားပုံကောင်းတွေလည်း ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပုံတွေကိုလည်း လူအများကြည့်ရအောင် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ကတဆင့် ဖြန့်ဝေပြတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ ကင်မရာထက် ကင်မရာနောက်က လူက ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိထားကြပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ အတွက် အိတ်ဆောင်ကင်မရာလေးတွေနဲ့လည်း ကင်မရာ အကြီးတွေနဲ့ ရိုက်သလို ကြည့်ကောင်းတဲ့ ပုံရအောင် ရိုက်ပြဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ လက်ကိုင်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ လက်စွမ်းပြချင်ပြတတ်ကြပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ ထိပ်ဆုံးအဆင့် အနုပညာသမားစစ်စစ်တွေထက်တောင် အနုပညာရှင်နဲ့တူအောင် နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ခက်တာက သူတို့လက်ရာဟာ သူတို့ အပြောလောက် မကောင်းသေးတာပါပဲ။
ဖားလောင်းများ။ ။အဆင့် (၅)
ဓာတ်ပုံပညာကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာကို ကိုယ်နှင့်မကွာ ဆောင်တတ်ကြပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းမျိုးစုံ သီအိုရီပေါင်းများစွာ ကျေသူဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ပုံများမှာလဲ အပြစ်ပြောစရာမရှိပါ။ ဓာတ်ပုံပညာအကြောင်း (ကင်မရာအကြောင်းမဟုတ်)ကို တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာတတ် ကြပြီး အခြားသူရိုက်ထားသောပုံများအားလည်း ဝေဖန်နိုင်ခံစား နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ရိုက်ဖို့ ၀န်မလေးသလို မော်ဒယ်ရိုက်ခြင်းကိုလည်း အထူးကြိုက်နှစ်သက်တတ်ကြ ပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အလုပ်အားရက်များတွင်တော့ အောက်ဒိုးထွက်ပြီး ရှုခင်းပုံများ လိုက်ရှာတတ်ကြပါတယ်။ ဆုကြေးစားပြိုင်ပွဲကြီးငယ်များ အဆင်ပြေသလို ၀င်ပြိုင်တတ်ကြ ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်၊ စုပေါင်းပြပွဲများလုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရောင်းချခြင်းကိုလည်း အမြဲရည်မှန်းထားတတ်ပါတယ်။
၀ါသနာရှင်မက ကြေးစားမကျ အဆင့်ကို ရောက်နေ သော်လည်း ဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်သောဝင်ငွေမှာ အဓိက၀င်ငွေရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းနေသေးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတတ်ပညာနှင့်ဖန်တီးနိုင်မှုကို အနုပညာသွေးသား ၀ိညာဉ် ထည့်ပေးလိုက်လျှင် ထိပ်ဆုံး(၇)အဆင့်ကို တက် လှမ်းနိုင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့ပေသော်ငြားလည်း ကင်မရာ ပစ္စည်းပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်း ခေတ်ပေါ်နောက်လိုက်ခြင်း စသည့် အကျင့်ဆိုးများကြောင့် အချိန်မရွေး အောက်ဆုံးအဆင့်များသို့ ဇောက်ထိုးဆင်းသွားနိုင်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထည်ကြီးပျက်များ။ ။ အဆင့် (၆)
အထည်ကြီးပျက်ဆိုသည်မှာ တကယ်တန်းတော့ ထိပ်ဆုံးမှော်ဝင်သူအဆင့် ရောက်ခဲ့ပြီးသော ဓာတ်ပုံ အနုပညာရှင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နေထိုင်စားသောက်မှုစရိတ်တွေအတွက် သူဖန်တီးထားတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို ချရောင်းရသူဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ မှာ သူ့ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားကို ဈေးကွက်ဝင်မှုနဲ့ စိတ်ကွန့်မြူးမှု တို့အကြား လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲ ပို့လိုက်ရ သူပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကနေ ဈာန်လျှောပြီး ဈေးကွက်ဝင် ဖန်တီးချက်များကြောင့် အဆင့် ကျခဲ့ရပါတယ်။ ဂယ်လာရီပိုင်ရှင်တွေ၊ အမဲရှာနေတဲ့ အနုပညာ ကုန်သည်ပွဲစားတွေ၊ အနုပညာလက်ရာစုဆောင်းသူ သူဌေးတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်တိုင်ဖောက်သည်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေဟာ ဂယ်လာရီတွေက တဆင့် စတိုင်တခု၊ ရေစီးကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် အများပြည်သူခံစားကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။
မှော်ဝင်သူများ။ ။ထိပ်ဆုံးအဆင့် (၇)
အနုပညာမှော်အောင်ပြီဖြစ်တဲ့ အရှားပါးဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပါ။ ဒီအဆင့်ရောက်နေရင် ဖိုတိုဂရပ်ဖာ ဓာတ်ပုံ ဆရာဖြစ်ခြင်း ရှိခြင်းတွေ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒီအနုပညာရှင်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအယူအဆတွေ ခံစားချက်တွေကို နေရာတစ်ခု၊ လူတစ်ယောက်၊ ပုံရိပ်တစ်ခု စသည်တို့ကို ကင်မရာသုံးပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ ဖော်ကြူးလိုက်ခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာဟာ သူနဲ့ခံစားသူပရိသတ်ကြားက မီဒီယံတစ်ခုသက်သက်မျှသာ အသုံးတော်ခံပါတယ်။သူဟာ ကင်မရာကို ကျေညက်နေပြီးလည်းဖြစ်ပါမယ်။ ဓာတ်ပုံအယူအဆ တွေကိုလည်းသိဖူးရင်သိဖူးပါမယ်။ သူပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးချိန်မှာ တော့ ကင်မရာဟာသူ့စိတ်ခန္ဓာရဲ့ အစွယ်အပွားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီးသီအိုရီနဲ့ တက်ကနစ်ကယ်ကိစ္စတွေဟာသူ့ရဲ့သိစိတ် ကနေ ဝေးလွင့်သွားပါတယ်။ ဥပမာ ဂီတအနုပညာသမား တစ်ယောက်ဟာ သီအိုရီတွေ သင်ခဲ့မယ် စကေးလ်တွေ ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဖန်တီးနေချိန်မှာ ဒါတွေ ကို မေ့သွားတဲ့ သဘောနဲ့ဆင်ပါမယ်။ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်မှာ စုတ်တံတစ်ဒါဇင်ရှိသလို၊ ဂစ်တာသမားတစ်ယောက်မှာ ဂစ်တာ အလက်နှစ်ဆယ်ရှိသလို၊ ဓာတ်ပုံမှော်ဆရာ တစ်ယောက်မှာ လည်း မတူကွဲပြားစွာဖန်တီးမှုပေးတဲ့ ကင်မရာပေါင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါ တယ်။ သူတို့ အသုံးပြုတဲ့ ကင်မရာတွေဟာ တစ်ခါသုံး ကင်မရာ၊ Pinhole ကင်မရာ၊ ခေါင်းမြီးခြုံကင်မရာစသည်ဖြင့် မျိုးစုံဖြစ်နိုင်သလို ကင်မရာတစ်လုံးမှ မရှိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်မှုနဲ့ မည်သို့မျှ မဆက်စပ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ နေထိုင်ပုံတွေဟာ ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ပါ မယ်။ သူတို့ ၀ိညာဉ်ပူးကပ် ဖန်တီးထားတာတွေကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးသူ တွေကလွဲရင် မြင်ဖူးဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အောက်အဆင့်ကို တစ်ဆင့်ချပြီး အထည်ကြီးပျက် ဘ၀အဖြစ် ရောင်းမစားမချင်း သူတို့ရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုအများပြည်သူ မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
အနိမ့်ကနေအမြင့် ဓာတ်ပုံဆရာအဆင့်ခုနစ်ဆင့်လုံး တင်ပြပြီးစီးသွားပါပြီ။ သင်ဘယ်အဆင့်မှာ ရောက်နေပြီလဲဆိုတာ ဖိုတိုဂရပ်ဖာများ ဆန်းစစ်နိုင်ကြပါစေ။
(Ken Rockwell ရဲ့ The Seven Levels of Photographers ကို မှီငြမ်းပြီးဆီလျော်အောင် ပြန်လည်ရေးသားထားပါတယ်။)
သဘာဝမြန်မာဓာတ်ပုံမဂ္ဂဇင်း (အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂)
comment လေးခု လုံးက ကို ကျော်နန္ဒ ဘာသာပြန် ဗျ . . The Nature မှာပါတာ . . ဒီပိုစ့် မှာ မှတ်တမ်းလေး သိမ်းထားလိုရင်း နဲ့ ၀င် ပေးဖြစ်တာပါ . . . ဆြာအုပ် ရေ . . .။
ဒီဟာကို ဖဘမှာ တွေ့လိုက်ပြီး ပြန်ရှာလို့ မရဖြစ်နေတာ။
ကောင်းပါလေ့ဗျာ ဓာတ်ပုံဆြာတွေ အကြောင်းကို ပိုသိသွားတာပေါ့
အမှတ်စဉ် ၃၄ က တော့ မှန်ကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းးပဲ
ပုံဟောင်းထိုင်ပြင်နေမယ့်အစားးး အဲ့ပုံထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပုံရိုက်ပါလားးးလို့ အကြံပေးလိုက်မယ် ဟီဟီ
တကယ် တမ်းတော့ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ စိတ်ဟာ နားလည်ရလွယ်ပါတယ် ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းသာ ကောင်းကောင်းး နေပေးတတ်ရင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဆရာရဲ့ချစ်သူ ဖြစ်ရမှာပဲလေ နော်
မိကြောင်းမွေးထားတဲ့ကန်ထဲ မိကြောင်းကိုသတ်မလို ပိုစ့်မျိုးးး လုပ်ပေးပါလို့ပဲတောင်းးချင် တာာာ အဟဲ
သြ လက်စသတ်တော့ ဓါတ်ပုံဆြာတွေဆိုတာ ဒီဂလိုတွေ ဖစ်တတ်သကိုးးးးး